Muxuu ahaa sawirka dad badan soo jiitay ee wiilka aabihii dhabarka ku sita? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Muxuu ahaa sawirka dad badan soo jiitay ee wiilka aabihii dhabarka ku...
Sawir wiil dhalinyaro ah oo dhabarka ku sita aabihiis si uu u tago xarun laga qaato talaalka feyriska Corona ayaa soo jiitay dareenka kumanaan qof oo ah dadka isticmaala baraha bulshada dalkaasi Brazil.
Sawirku wuxuu muujinayaa Tawy Zó’é, 24 jir ah, oo la daalaa dhacaya qaadista Wahu Zó’é, 67.
Ninka dhalinyarada ah ayaa muddo saacado ah ku dhex lugeeyay kaynta, isagoo ku sii socda waddo ay ku yaallaan buuro iyo togag ilaa uu ka gaarayay xarun ay ku sugnaayeen shaqaalaha caafimaadka ee gobolka.
Dhadadan waxa ay kicisay dareenka dhakhtar Erik Jennings Simões, kaas oo sawirka ka qaaday wiilkan siday aabihii.
Shaqaalaha caafimaadka, ayaa la yaabay ka go’naanta ninka da’da yar ee ka so jeeda dadkii asal ahaan loogu yimid Brazil inuu tallaalo aabbihiis waxay ahayd mid ka mid ah daqiiqadihii ugu wacnaa ee uu goob joog u ahaa 2021.
Ninkan da’da ah ee uu wiilkiisa dhabarka ku siday ayaa waxaa feyriska Corona laga tallaalay Janaayo 2021, bilawgii talaalka covid-19 ee dalkaasi Brazil.
balse dhakhtarka ayaa markii ugu horeysay sawirkan ku baahiyay baraha bulshada toddobaadkii aanu soo dhaafnay , sanad a dib markii la qaaday.
“Waxaan rabay inaan diro fariin togan bilawga sanadka,” ayuu dhakhtarku u sheegay Vinícius Lemos, oo ah wariye u shaqeeya BBC laanta Brazil.
“Waxay sidoo kale ahayd habin fariin ku aadan feyriska Corona looga dirayo dadka qowmiyada Zoe ee ku nool keymha dalkaasi ,” ayuu intaa raaciyay Erik.
Dadka asaliga ah ee Zóé waxay ku nool yihiin qiyaastii 669,000 hektar oo ku yaal gobolka Pará, ee waqooyiga Brazil, oo u dhow webiga Amazon, aag kayn si weyn loo ilaaliyo.
Sida laga soo xigtay shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya gobolka, dadka Zóé waxay ka kooban yihiin ilaa 325 qof oo asal ah oo ku kala firirsan dhulka in ka badan 50 tuulo.
Sannadka oo dhan, badanaa waxay u guuraan meelo kala duwan oo degaanka ah oo ay ku nool yihiin.
Dr Erik, oo 52 jir ah, wuxuu ahaa dhakhtarka dadka Zóé ka masuulka ah ku dhawaad ​​labaatan sano.
Waxa loo arkaa inay yihiin dad xiriir dibadeed dhawaan la yeeshay dunida inteeda kale, islamarkana inta badan ku nool dhulkaasi keymaha ah.
Tan iyo bilowgii feyriska corona, marka loo eego xogta rasmiga ah, magaaladu ma diiwaangelin wax kiis ah oo COVID-19 ah.
Previous articlePhotoLap: wax ka ogow khatarta ku gedaaman barnaamijkan laga daba dhacay
Next articleFanaanada khadra daahir, fanka uun baad ku baratee , Hibo kalena way lahayd, waraysi ay siisay bbc